🥇 ▷ Google ayaa Xaqiijiyay Bixinta Dadka si Ay Uguur-Galaan Agabkooda Cilmi Baadhis Pixel 4 ✅
Google ayaa Xaqiijiyay Bixinta Dadka si Ay Uguur-Galaan Agabkooda Cilmi Baadhis Pixel 4
Google wuxuu ka shaqeeyaa taleefankiisa casriga ah ee Pixel flagship – taxanaha Pixel 4 shirkadduna waxay dhowaan xaqiijisay qaabeynta taleefanka markii ay la wadaageysay bixinta casriga soosocda, qof walbana wuu la yaabay.
Hadda, shirkaddu wali waxay mar kale wadaagtay faahfaahinta ku saabsan telifoonkeeda soo socda, iyagoo jabiyey dhaqannada shirkadda. Waxay xaqiijisay in taleefanka casriga ee soo socda uu la imaan doono taageero xagga muuqaalka hawada iyo furitaanka wajiga.
Astaamahaasi waxay qayb ka noqon doonaan wax ay shirkaddu ugu yeedho “Motion Sense” oo ay ka shaqeeyaan shirkadda Soli chip. In kasta oo muuqaalka ‘Unlock Unlock’ uusan ahayn wax cusub hadana ku dhawaad ​​dhammaan kuwa sameeya taleefannada casriga ah ayaa soo bandhigaya astaantan, Google ayaa leh in nooca uu noqonayo kan ugu dhaqsaha badan uguna ammaansan.
Dhanka talaabooyinka amniga, baaraha matoorka raadinta wuxuu adeegsan doonaa chip Titan M amniga chip-ka casriga ah ee Pixel 4, markaa uma baahnid inaad ka walwaasho amniga. Xogta wajiga ayaa lagu keydin doonaa galkaas weligiisna kuma xirna internetka, marka qof kale kuma geli karto.
Iyo si loo hubiyo in wajiga furitaanka muuqaalkiisa casriga ah ee Pixel 4 uu u fiicanyahay sida ay shirkaddu sheegtay in ay tahay, Google wuxuu xaqiijiyey in uu sameeyay daraasad duleed. Taas dhexdeeda, shirkaddu waxay u baxday waddooyinka waxayna dadka siisay $ 5 kaarar hadiyado ah si ay wajiga ugu baadhaan. Tan waxaa horay u sheegay dhowr aqal warbaahin laakiin shirkadda ku saleysan Mountain View ma aysan xaqiijinin.
Xulashada Tifaftiraha: Chipset sameeyaha Qualcomm iyo Shiinaha weyn ee ‘Tencent’ waxay ku wada jiraan 5G iyo Gaming Smartphone
Google ayaa sheegtay in 18 bilood ka dib aruurinta xogta, ay ka takhalusi doonto wejiga xogta ee ay shirkaddu u soo aruurisay baaritaanadaas. Waxaa kale oo ay sheegtay in baaritaanada wajiga hadda la “yahay mid sir ah oo marin loo helayo” iyada oo aan wax xiriir ah la laheyn koontada Google ee dadka.
Adoo arkaaya habka ay Google ugu wada baxeyso muuqaalkan “Motion Sense”, waxay umuuqataa inuu muuqaalku noqon doono meesha ugu weyn ee lagu iibinayo qalabka soo socda ee Pixel 4. Waxaa wali loo arkaa sida ay ku socoto nolosha dhabta ah iyo sida dadku u qaabilaan. Sidaas awgeed, waa inaan sugnaa illaa laga soo saarayo ganacsiga cusub ee calanka cusub ee Google ka soo baxa.
Xiga: Telefoonkii ugu horreeyay ee la laaban karo ee dunida, Royole FlexPai ayaa maray tijaabada joogtada ah ee JerryRigEwalboo dhan waari